I-OpenStage: I-Distro entsha ethathwe ku-Arch Linux | Kusuka kuLinux
I-OpenStage: I-Distro entsha etholwe yi-Arch Linux
I-OpenStage Kuyinto a «Sistema Operativo» esitebeleni se «GNU/Linux» ngokususelwa ezinqolobaneni «Arch» ngemodeli ye- «Rolling Release». Okuthi ngokuya ngabathuthukisi bayo ithembisa ukusebenza nayo interface enembilenjengoba yenziwa ukuthi ibe ne- idrayivu elula kuthambekele kuzo zonke izinhlobo zabasebenzisi.
Futhi, I-OpenStage unikeza ngokuzenzakalela uchungechunge lwe amathuluzi afakwe ngaphambili, ikakhulukazi kuye ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza kanye nohlelo ku-Linux. Ngaleyo ndlela, ukuthi kube yiphrojekthi enhle kakhulu ye- «Código Abierto» ukwazi nokuzama, nangokunye okuhle kwabanye «Sistemas Operativos» y «Distros GNU/Linux» ngokwesiko, ngenxa yayo imvelo yedeskithophu elungisiwe ngomuzwa ongcono womsebenzisi, nokusebenza okuhle, isivinini nokuzinza phezu kwekhompyutha.
Elinye iphuzu elithandekayo, mayelana nokushiwo okusha I-Distro ukuthi iza nayo Ideskithophu ye-KDE Plasma futhi iyatholakala ngezinhlobo ezimbili: Eyodwa ene- I-Systemd nomunye nge I-OpenRC. Ngenkathi kwakhiwa I-OpenRC kusekelwe ku- I-Artix. Futhi njengoba kuyiphrojekthi yakamuva kepha ethokozisayo, imininingwane eyengeziwe ngayo ayikatholakali ku- «DistroWatch», kepha isivele ihlolwe, ngakho-ke isesigabeni sokuqala sohlu lwayo lokulinda lwe- Ama-Distros ekuhloleni.
1 Ukuhlolwa ku-DistroWatch
2.1 Izici eziyinhloko ze-OpenStage
2.2 Landa futhi ufake
Masikukhumbule lokho «DistroWatch» hlukanisa i- uhlu lokulinda en Izigaba ze-4. Ukuba ngu- isigaba sokuqala eyakhiwe yiqembu lamaphrojekthi alindele ukuthi ahlolwe, noma engezwe ku-database yawo noma afakwe kwelinye lamaqembu asohlwini. I- isigaba sesibili Kubandakanya amaqembu amaphrojekthi angazange ahlolwe ngenxa yezinkinga zobuchwepheshe noma ukungabi bikho kwengxenye noma imibhalo.
La isigaba sesithathu yilabo abanomkhawulo wendawo, wolimi noma wezomthetho. Futhi i- isigaba sesine ngalabo abangangezwa kufayela le- BD, kepha balinde inguqulo entsha yalo ukuqinisekisa ukuthi isakhula ngokusebenzayo. Ukuze kuthi uma sekukhishwe uhlobo olusha, luzolinganiswa.
Izici eziyinhloko ze-OpenStage
Kufaka izinhlelo zokusebenza zeDolphin, Kate neKrite ezinokufinyelela komlawuli: Njengesenzo sokuthuthukisa umbono wokuthi: Umsebenzisi ngamunye kufanele akhululeke ukukhetha ukuthi enzeni ngaphandle kwemingcele ohlelweni lwabo lokusebenza. Njengoba izinketho ezimbalwa noma imikhawulo engaphezulu ingukubandakanyeka hhayi ukuvela.
Inikeza ukuphepha nokuvikelwa nge-SELinux naseFirewalld: Ukuphoqelela ukuphepha komdabu okuvele kukhona kwe-GNU / Linux Distros, i-OpenStage inaka kakhulu ukuphepha kohlelo nokufinyelela kwe-Intanethi. Ngalesi sizathu, usebenzisa i-SELinux uvimbela izinhlelo zokusebenza ukuthi zingafinyeleli kwikhompyutha yakho, ngenkathi ngeFirewalld ungeza isihlangu kuxhumano lwakho lwe-Intanethi.
Ukusebenza okuhle kakhulu nokwenza kahle okuphezuluNgokufaka (ukwakhiwa nokulungiswa) kernel yayo, ehambisana nanoma iyiphi enye i-ArchLinux noma i-AUR kernel. I-kernel yangokwezifiso enjalo ithembisa ukusebenza okungcono nokusebenza okushelelayo, ngokusekelwa okungcono kwamadivayisi ahlukahlukene nezinhlobo zokuhlukanisa. Kubandakanya i-AUFS eboshwe futhi inikwe amandla ngokuzenzakalela, ukuminyaniswa kwezinqubo ze-RAM kanye nohlelo lokusebenza lweGoPreload ukusheshisa ukulayishwa nokuphathwa kwezinqubo nokuqalisa kwe-OS
Landa futhi ufake
Kulabo abathandi be «Software Libre» y «GNU/Linux», nginentshisekelo yokuzama lokhu okumangazayo kanye noveli I-Distro ngokusekelwe ku «Arch», angafinyelela kufayela le- Iwebhusayithi esemthethweni yalo, ukulanda esigabeni «Download» futhi wazi inqubo yayo yokufaka esigabeni se- «Install Guide». Futhi nokufinyelela kumaSocial Networks afanayo ukuthola eminye imininingwane.
Amanye amaqiniso athakazelisayo
Iphakethe lesithonjana: Qoqa
Umphathi wewindi: IKvantum
Isifaki sezithombe: Ingwane
Izinhlelo zokusebenza eziyizintandokazi: GIMP, Inkscape, Libreoffice, Kmail, Kontact, Brave, Cantata, Kamoso, K3B, MPV neVLC.
Ukusetshenziswa okumaphakathi kwe-RAM ekuqaleni: +/- 512 MB
Ikhodi yomthombo: I-OpenStage ku-GitLab
Sithemba ukuthi ukhona "okuncane kodwa okuwusizo" mayelana nale GNU / Linux Distro entsha ebizwa «OpenStage», kusekelwe ezinqolobaneni «Arch» ngemodeli ye- «Rolling Release», yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwesimangaliso semvelo, esikhulu futhi esikhulayo sokusebenzisa kanye nokwenzelwe «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-OpenStage: I-Distro entsha etholwe yi-Arch Linux
Enye eqala ukubheka umhlaba we-OpenRC.
Sanibonani, ama-Unodetantos! Siyabonga ngokuphawula kwakho. Futhi yebo, enye i-Distro ye-OpenRC 🙂
UKirta uthole i-Epic MegaGrants, umnikelo ongu- $ 25 kusuka kuma-Epic Games
I-Filezilla: Iklayenti elihle kakhulu lamahhala le-FTP elinenguqulo entsha etholakalayo